Services – Global TA & HR
Amazing One-Stop Service
စတင်အသုံးပြုချိန်တွင် လိုအပ်သော ဒေတာများ ထည့်သွင်းခြင်း၊ နေ့စဉ်အသုံးပြုရလွယ်ကူစေရန် ဒေတာများအား စစ်ဆေးခြင်း နှင့် အစီရင်ခံခြင်းများကို အလွယ်တကူထုတ်ယုနိုင်စေရန် စိတ်ကျေနပ်စေသည့် ပြီးပြည့်စုံသော ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နေရာတည်းဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ကနဦးသုံးစွဲသူအတွက် ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဘာကူညီဆောင်ရွက်ပေးမလဲ? ပထမဆုံးအနေနဲ့ Data ထည့်ဖို့ရာ အတွက် Excel Template ပေးပါမည်။ Information တွေကိုလည်း ဖြည့်ပေးရုံသာမက ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ပါ Log in ဝင်ဖို့ရာ ‌account ပါ အဆင်သင့်သုံးနိုင်သည်အထိ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Executive နှင့် HR တွေကိုလည်း အခက်အခဲမရှိ အသုံးပြုနိုင်အောင်လည်း Training ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဝန်ထမ်းများအတွက်လဲ Training ထပ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Daily situation Checking
System ချို့ယွင်းမှာ စိတ်ပူနေပါသလား? ကျွန်တော်တို့ဘက်က Customer Care Team တွေက စက္ကန့်နှင့် အမျှ System တွေကို စစ်ဆေးပေးနေမှာ ဖြစ်သည့်အတွက် လုံခြုံစိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
Customer ဘက်က လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရသည်မှာ ကျွန်တော်တို့၏ တာဝန်ဖြစ်သည်။ ဉပမာ အနေဖြင့် Customer ဘက်က တောင်းဆိုသည့် feature အသစ်များ၊ Bug/Error များ ကို စိတ်ကျေနပ်မှုရှိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Complaint နှင့် Issue များကိုလည်း Hotline ဖြင့် ရုံးချိန် အတွင်း Customer Care Teamဘက်က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ Social Media Platform များတွင်လည်း Customer Care Team နှင့် တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အတွက်လည်း Group chat များဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Customer Site ထဲ အခက်အခဲ တစုံတရာရှိပါကလည်း Service Team ဘက်က အမြန်သွားရောက် ဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။ Customer ဘက်က HR or Executive အပြောင်းအလဲ ရှိပါကလည်း ကျွန်တော်တို့ဘက်က Training ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။